मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-02 > खनन राजा सुलेमान (भाग 21)
"म तपाईंसँगै मेरो कार पार्क गर्नेछु," टमले पसललाई भने। "यदि म आठ हप्तामा फर्केर आइनँ भने म सायद बाँच्दिन।" पसलले उसको अगाडि पागल मानिस जस्तो गरी हेर्यो। Ight आठ हप्ता? तपाई दुई हप्तासम्म बाँच्ने छैन! » टम ब्राउन जुन। एक भावुक साहसी छ। उनको लक्ष्य थियो कि यदि उनी मृत्यु भेल मरुभूमिमा पक्राउ गर्न सक्दछन् - उत्तर अमेरिकाको सब भन्दा गहिराइ, सब भन्दा सुक्खा क्षेत्र र विश्वको सबैभन्दा चर्को क्षेत्र - यति लामो समयसम्म। पछि उनले लेखे कि मरुभूमिको परिस्थितिले उहाँबाट पहिलेको भन्दा बढी माग गरेको थियो। ऊ आफ्नो जीवनमा कहिल्यै तिर्खाएको थिएन। यसको पिउने पानीको मुख्य स्रोत शीत थियो। हरेक रात उनले शीत पक्रन उपकरण राख्थ्यो, त्यसैले उनले बिहान पिउनको निम्ति पर्याप्त ताजा पानी संकलन गरेका थिए। चाँडै टमले क्यालेन्डर अभिविन्यास गुमायो र नौ हप्ता पछि उसले निर्णय गरे कि यो घर जाने समय हो। ऊ आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको थियो तर स्वीकार गर्दछु कि ऊ शीतको उपस्थितिबिना बाँच्न सक्दैन थियो।
गर्मीको बिदामा मैले परिवारसँग धेरै दिनहरू फार्ममा बिताए। हामी प्रायः छिट्टै उठ्थ्यौं र बुबा र म शिकार गर्न जान्थ्यौं। बिहानीको ताजातालाई मैले बिर्सेको छैन जब सूर्यको पहिलो किरणले रूख, घाँस र बोटबिरुवामा शीतको थोपा बनायो र हीरा जस्तो चम्कायो। Cobwebs गहना चेन जस्तै देखिन्थ्यो र अघिल्लो दिन को सुकेको फूलहरु बिहानको उज्यालोमा नयाँ ऊर्जा संग नाच लाग्यो।
स्फूर्ति र स्फूर्ति
मैले शीतलताको वास्ता गरेन जब सम्म म हितोपदेश १ :19,12: १२ का शब्दहरूले सोच्न उत्साहित भएन। “राजाको बदनाम सिंहको गर्जनजस्तै हो। तर उनको अनुग्रह घाँसमा भएको शीत झैं छ।
“हाम्रो स्थानीय बलि bow क्लबमा सामेल भएको लगभग तीन बर्ष भयो। धेरै खेलाडीहरू बिहान १ बजे आउँछन् र खेल 13० मिनेट पछि शुरू हुन्छ। यो संक्रमणकालको अवधिमा, खेलाडीहरू सँगै बसे र कुरा गरे, तर पहिलो केही वर्षहरूमा मैले मेरो कारमा बसेर केही बाइबल अध्ययन गर्ने निर्णय गरें। जतिसक्दो खेलाडीहरूले आफ्नो बल लिए, म त्यहाँ जान चाहन्छु र बलि there हरियोमा जान चाहन्छु। केही महिना पहिले मैले अध्ययनको सट्टा क्लबको लागि केही गर्ने निर्णय गरें। मैले गतिविधिको क्षेत्र खोजेँ र काउन्टर क्षेत्रमा एउटा काम पाए। दर्जनौं गिलासहरू सि the्कबाट बाहिर निकाल्नुपर्‍यो र ह्याचमा राख्नुपर्‍यो; पानी, बरफ र चिसो पेय पदार्थहरूका साथै बियर क्लब कोठामा प्रदान गरियो। यो राम्रो आधा घण्टा लाग्यो, तर म काम साँच्चै मजा। बलिling सागहरू ती स्थानहरू हुन् जहाँ तपाईं एक मित्रता बनाउन वा अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अफसोसको लागि, एक भद्र मानिस र मैले हाम्रो टाउको क्र्याश गरेका छौं, त्यसैले हामीले हाम्रो दूरी पछाडि राख्यौं। जे भए पनि, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि म कत्ति हर्षित भएँ, र सबैभन्दा माथि, जब ऊ मकहाँ आयो र भन्यो: 'तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यले क्लबको लागि ठूलो फरक पार्छ।'
यो सजिलो र अझै महत्वपूर्ण हुन सक्छ। बिहानको शीत जस्तो हाम्रो लनमा। हामी चुपचाप र दयालु हुँदै हामीसँग सम्पर्क गरेकाहरूको जीवनमा भिन्नता ल्याउन सक्छौं। तपाईंले बनाउने प्रभावलाई कहिल्यै हल्का नठान्नुहोस्। पेन्टेकोस्टमा, पवित्र आत्माले १२० जना विश्वासीहरूलाई पूरा गर्नुभयो। तिनीहरू केवल तिमी र म जस्तो साधारण व्यक्तिहरू थिए, र उनीहरू अझै तीनै व्यक्तिहरू थिए जसले पछि "विश्वलाई उल्टो पारिदिए"। दुई सय ड्रप भन्दा कम शीतले सम्पूर्ण संसारलाई नम्यो।
अन्तमा एक विचार। शीतले यसको उद्देश्य पूरा गर्दछ - स्फूर्ति, सुशोभित र जीवन दिन्छ। जब तपाई एक बन्न प्रयास गर्नुहुन्छ तर शीतको थोपा पसिना आउँदैन! येशू ख्रीष्टमा भएको मात्र तपाईं परमेश्वरको शीत हुनुहुन्छ। यो परियोजनाहरु र रणनीतिहरु को बारे मा छैन। यो सहज हो, यो स्वाभाविक हो। हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले येशूको जीवनलाई सृष्टि गर्नुभयो। प्रार्थना गर्नुहोस् कि उसको जीवन तपाईंमा फैलियो। केवल आफै हुनुहोस् - शीतको केही थोपा।